Faradoboky ny K25 : “Lany Dada ah!!!” -
AccueilRaharaham-pirenenaFaradoboky ny K25 : “Lany Dada ah!!!”
17/12/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
“Lany Dada ah!!!”. Tomefy olona ary nangorom-potsy ny kianjaben’i Mahamasina. Tontosa soa aman-tsara, ny sabotsy 15 desambra teo, ny hetsika famaranana ny fampielezan-kevitra “Faradoboka” ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana.
Voaporofo, araka iny hetsika “Faradoboka” iny ny fahalanian’ny kandidà Marc Ravalomanana. Tsy tambo isaina ireo olona tonga nanohana an’i Dada Ravalomanana tamin’iny hetsika tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina iny. Nasehon’ny mponina ny fahatokisany an’i Marc Ravalomanana hitantana indray ny firenena. Nasehon’izy ireo tamin’izany ihany koa ny hafaliany sy hetahetany miandrandra fiovana sy fanovana eto amin’ny firenena.
Tetsy andaniny, nampiseho ny hafaliany ihany koa ny kandidà laharana faha-25, nanoloana ireo vahoaka marobe tonga nanotrona sy manohana azy amin’ny fiatrehany ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana Filoham-pirenena, ny 19 desambra izao.
Anisan’ny nitondran’i Dada tsindrim-peo ny mahakasika ny fandaharan’asany amin’ny alalan’ny “Manifesto” sy ny “Map 2”. Nambaran’ny kandidà Marc Ravalomanana fa tsy maintsy hapetraka ny fampihavanam-pirenena, mba hisian’ny fitoniana eto amin’ny firenena. Teo ihany koa ny filazany fa tsy maintsy atao ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana, izay hananany stratejia miaraka amin’ireo mpitandro filaminana (tafika, zandary, polisy).
Tsy nohadinoin’i Dada ihany koa ny nanambara tamin’ireo vahoaka marobe fa hatsaraina ny tontolon’ny fahasalamana, izay voalohan-karena eto an-tany. Teo ihany koa ny filazany amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny fampianarana amin’ny alalan’ny fanomezana fiofanana ireo mpanabe sy amin’ny alalan’ny famerenana ny fizarana ny “kits scolaires”, ary fampidirana an-tsekoly ny ankizy. Ny famoronan’asa ho an’ny tanora sy ny vehivavy, ny fananganana fotodrafitrasa manaraka ny vanim-potoana, ny fanamboaran-dalana, ny fanomezan-danja sy fanohanana ireo tantsaha mpamboly sy mpiompy, sns. Izany rehetra izany, hoy izy, tsy maintsy hotanterahina ao anatin’ny fotoana fohy. 100 andro, hoy ny kandidà Marc Ravalomanana, dia ahita fiovana goavana eto amin’ny firenena ny vahoaka malagasy. Hatsaraina, hoy izy, ny fahefa-mividin’ny mponina, hatsaraina ny vokatra, sns.
Araka izany, tsy nody tamim-pahatezerana ireo olona marobe tonga tetsy Mahamasina, fa nody tan-kafaliana nahazo ireo fampanantenana, izay tsy maintsy hotanterahin’i Dada anatin’ny fotoana fohy…
Marihina fa nanafana ny hetsika ireo mpanakanto marobe, toa an’Ambondrona, Bodo, Tence Mena, Black Nadia, Shyn, sns.